version 0.2.6 – ဆုတ်ယုတ် begone
ဇွန်လ 17, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု2comments
သင့်အကြောင်းမျှမကြေငြာရှိ၏သတိထားမိစေခြင်းငှါ, 0.2.5. ကျနော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာ post နိုင်ခဲ့ကြသည်ခြင်းမပြုမီပထမဆုတ်ယုတ် bug ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ခဲ့သည်. မတူညီသောဘာသာစကားနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့် url အစားထိုးနှင့်အတူအချို့သောပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့သူတွေဟာနှစ်ခုဗားရှင်း 0.2.6 ကသံနှင့်ရိုက်ကြမည်. ကျနော်တို့ bug တွေကြောင့်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတူကူညီခဲ့သောကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်. ငါတို့သည်အနာဂတ်၌သူတို့အားမြန်ဆန်ပြီးပြင်ဆင်ချက်ထုတ်လွှင့်နည်းနည်းရှိသည်လိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: bugfixes ပြင်ဆင်မှုများ, wordpress မှာ plugin
ဇွန်လ 17, 2009 တွင် 3:46 ညနေ
hi. ငါသည်အခြားနေ့ရက်သတင်းစကား left, ဒီ feature ဘလော့ဂါအပေါ်ရရှိနိုင်ခဲ့လျှင်တောင်း. ကိုယ့်လူကအပေါ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်အားကြားပြောလေ၏, ထိုသို့တော်တော်မကြာမီထွက်လာတယ်. ကိုယ့်အီးမေးလ်ဖြင့်ပြောကြားခဲ့သည်မည်ဖြစ်ကြောင်း. ဆယ်ရက်နောက်ပိုင်းတွင်, ငါအလားအလာတူကိုကြည့်သောအရာကိုသိရန်ချင်ပါတယ်.
ဇွန်လ 17, 2009 တွင် 4:13 ညနေ
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မကြာသေးခင် bug တွေကြောင့်နည်းနည်းနှောင့်နှေးခြင်းနှင့် wordpress မှအဆင့်မြှင့်တင်ရန် 2.8, ဒါပေမယ့်အပေါ်လုပ်ဆောင်နေ, ငါရက်အနည်းငယ်ပဲလမ်းကိုခန့်မှန်း. ထိုနှောင့်နှေးနှင့် ပတ်သက်. စိတ်မကောင်း.